Midowga Afrika oo Donald Trump ka dalbaday in uu ka laabto gaf uu u geystay - Hablaha Media Network
Midowga Afrika oo Donald Trump ka dalbaday in uu ka laabto gaf uu u geystay
HMN:- Midowga Afrika ayaa si weyn uga carooday hadalkii gafka ahaa ee dhawaan uu ka dhawaajiyay Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump , hadalkan ayaana ka careesiiyay dadyow badan oo daafaha Dunida kunool.
War Saxaafadeed si adag loo qoray oo kasoo baxay Midowga Afrika ayaa lagu muujiyay sida uu Midowgu uga soo horjeedo hadalka sharaf dilka ah ee kasoo yeeray Madaxweynaha Mareykanka.
Wakiilada Midowga Afrika ee ku sugan caasimada Washington, ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin, ugana careysan yihin hadalkii Trump, taasi oo ay ku sheegeen inay xaqiijineyso in maamulka Mareykanka uu si qalad ah u fahmay qaarada Afrika.
Dalka Botoswana oo kuyaala Koonfurta Qaarada Afrika ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo muujiyay carada hadalkii kasoo yeeray Donlad Trump, waxa ayna u yeertay dowladaasi safiirkii Mareykanka u joogay.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka shan qariyay hadalo ay adag tahay in af Soomaali lagu turjumo ayna ka muuqato cunsuriyad iyo meel ka dhac meeshii ugu xumeyd uu u geesanayo dadka soo galootiga ah.
“Maxaan ku dooneynaa in aan dalkeena u keeno dalalkaas ka soo baxay xaga danbe” ayuu yiri Madaxweynaha dalka Mareykanka xili uu ka qeyb galayay shir looga hadlayay qaxooti kaga soo qaatay dalal Afrikaan ah iyo dalka Haiti.